သုံးဆတံတား, Tromostovje - Ljubljana
တည်နေရာ: Ljubljana, ဆလိုဗေးနီး;
အဖွင့်: 1842; ။
Waterbody: Ljubljanica ။
သုံးဆတံတားတွင်တည်ရှိသည် Ljubljana ၏သမိုင်းဝင်စင်တာ ။ ဆွဲဆောင်မှုမြစ်ကိုဖြတ်ပြီးသရုပ်ဆောင်သုံးခုတံတားတစ်ခု ensemble ဖြစ်ပါတယ် Ljubljanica ။ သုံးဆတံတားအလွန်ပုံမှန်မဟုတ်သောဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်မြို့သူမြို့သားဟောင်းအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုနှင့်လူကြိုက်များခရီးသွားဧည့်ဦးတည်ရာကိုတစ်ဦးရတနာဖြစ်ပါတယ်။
အံ့သြဖွယ် ensemble 90 နှစ်ကျော်အထိတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ 1842 ခုနှစ်တွင်အီတလီဗိသုကာကဒီဇိုင်းသုံးတံတားများ၏ပထမ။ သူ Archduke ဖရန့်ကားလ်၏ဂုဏ်အသရေအတွက်အမည်ရှိနှစ်ယောက်မုတ်ခဲ့ခံခဲ့ရသည်။ အဆိုပါ XX ရာစုအစပိုင်းမှာရှိတံတားတိုးချဲ့ဖို့လိုအပ်ခဲ့ပေမယ့်အစားဗိသုကာပညာရှင်Plečnikတည်ဆဲဖို့အပြိုင် run လိုနှစ်ခုထက်ပိုသောတံတားများတည်ဆောက်ပေးရန်အဆိုပြုခဲ့သည်။ သူကခေါင်းဆောင်မှုနဲ့တူသောအရာတစ်ဦးမျှမျှတတမူရင်းစိတ်ကူး, ရှေ့ဆက်ထားတော်မူ၏။ အဟောင်းနှင့်အသစ်တံတားများအကြားမြင်နိုင်ခြားနားချက်မဖြစ်နိုင်ရန်အတွက်, သံလက်ရန်းသောကျောက်တံတားဖျက်သိမ်း, ဒါပေမယ့်အစား balustrade သစ်ကွန်ကရစ်တံတားပေါ်ကဲ့သို့တူညီသောတပ်ဆင်ပေးခဲ့သည်။
ဘတ်စ်ကားနှင့်ပေါ်လာတာဟာအရင် - ကအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး cruised များအတွက်မကြာသေးမီကမှီ, Triple တံတားတစ်ခုခရီးသွားဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သော် 2007, သမိုင်းဝင်စင်တာအတွက် Ljubljana ၏ , ထိုသို့နှင့်အတူတံတားယာဉ်ကြောမှပိတ်ထားပြီးလူကူးတံတားဖြစ်လာခဲ့သည်။
သုံးဆတံတားမဟုတ်မှသာ Ljubljanica ကမ်းကိုဆက်သွယ်ပေမယ့်နှစ်ဦးကိုအဓိကမြို့ပြဒေသများအကြားတည်ရှိသည် - ဗဟို City နှင့် Preseren ။ ထိုကြောင့်, မြို့ဟောင်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသွားရောက်လည်ပတ်တိုင်းခရီးသွားဧည့်, တလမ်းတည်းဖြင့်သို့မဟုတ်အခြားတံတားမှတဆင့်တတ်၏။ ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမကလစျြလြူရှုနေခဲ့သည်။ တံတား၏လက်ရန်းအဆောက်အဦးအနည်းငယ်လွန်ခဲ့သောရာစုနှစ်တညျဆောကျခဲ့ကွောငျး, ထိုဘာသာစကား Venetian စတိုင်တစ်ခုစှဲဖန်တီးပေးပါတယ်။ သို့သျောလညျးကိုပထမဦးဆုံးတံတားအတွက်၎င်း၏ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်ဆွဲဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်ကြာမြင့်စွာကဒီမှာပိတ်မိနေခရီးသွားဧည့်, လမ်းလျှောက်ဓာတ်ပုံများကိုများအတွက်တစ်ဦးထက်ပိုမျက်နှာသာထောင့်တက်ကောက်နေဖြစ်လျှင်, အခြားတံတားတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
စိတ်ဝင်စားစရာ Greyfriars Kirk ကယေရှုခရစ်၏ပန်းပုထားရှိမည်။ အဆိုပါ XVIII ရာစုအတွင်းကကျောက်ကိုတို့ကရှေ့ပြေးခဲ့သောသစ်သားတံတား၏အဓိကအလှဆင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာတံတားများ၏နောက်ဆုံးသိသိသာသာပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးအတွက်ကတ္တရာအပေါ်ယံပိုင်းဖယ်ရှားခြင်း, အစားကျောက်တစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါထားထားပြီးတဲ့အခါမှာ 2010 ခုနှစ်အတွက်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ကြောင့်လည်းအရေးကြီးပါသည်။
ဘတ်စ်ကား№32အားဖြင့် Triple တံတားရ။ Exit ကိုဘူတာရုံ« MESTNA HISA »မှာဖြစ်သင့်သည်။ အဆိုပါမှတ်တိုင်လမ်းမှ Next ကိုသင်မြစ်ဆီသို့နှစ်ခုလုပ်ကွက်ရှောက်သွားရကြမည်ဖြစ်သောအပေါ် Stritarjeva ulica, ဖြတ်သန်းပါတယ်။ ဒါဟာတံတားရန်သင့်အားဦးဆောင်လမ်းပြပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏သမ္မတကတော် (Laken) ၏ဘုရားကျောင်း
ဘယ်လိုပိုကောင်းမွေးဖွားပေးစေခြင်းငှါ - အရှိဆုံးသို့မဟုတ် cesarean?
တစ်ဦး strapless စားဆင်ယင်ဝတ်ဆင်ရန်ဘယ်လိုနေသလဲ?
ကိုယ်ဝန် 29 ပတ်ကြာ - သန္ဓေသားဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ
Jaden Smith ကနှင့် Kylie Jenner
လပေါ်ခန့်မှန်း -2သစ္စာဝါဒီဗားရှင်း
မွှေးသောနူးညံ့သိမ်မွေ့သော julienne mussels
Glass ကိုမီးဖိုချောင် extension ကိုစားပွဲပေါ်မှာ